ko htike's prosaic collection: June 2008
နာဂစ် ရံပုံငွေ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အကျဉ်းကျနေသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး campaign တစ်ခု အတွက် အင်တာနက် နှင့် ကွန်ပြူတာ အလွယ်တကူ မရနိုင်သော နေရာ တစ်ခုသို့ ခရီးထွက်မည် ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်တော်၏ ဘလော့မှ Post အသစ် တင်ခြင်းကို ယနေ့(၂၄.၀၆.၂၀၀၈) မှ စ၍ ၅ ရက်ခန့်၊ ခေတ္တရပ်နားထားမည် ဖြစ်သည်။ (သို့သော် အခြေအနေ တစ်ခုခုကြောင့် အဆင်ပြေလျှင် post တင်မည် ဖြစ်ပါသည်။)
ပို့စ် အသစ် မတင်နိုင်သည်မှ လွဲ၍ အခြားဘာမှ အပြောင်းအလဲ ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
Posted by ကိုထိုက် at 08:23 26 comments
Posted by ကိုထိုက် at 23:089comments
မွေးနေ့ရှင် မဲ့သော မွေးနေ့ပွဲ။ ၂၁.၀၆.၀၈ (လန်ဒန်)
Posted by ကိုထိုက် at 21:47 8 comments
Posted by ကိုထိုက် at 00:21 11 comments
FINAL UPDATE OF DRUGS DISTRIBUTER’S FATHER.
Lt-Gen.Ye Myint and wife Dr.Tin Lay Myint accompanied with one housemaid were returned back from Singapore on 20th June 2008 by Silk Air. U Mya Han of FORTUNE INTERNATIONAL COMPANY was on the same flight but not as an entourage of Lt-Gen.Ye Myint. Very strange thing is that, Lt-Gen. Ye Myint & his wife were flown as economy class passenger. This is notanormal facility for his Rank in the Myanmar Military Government.
Posted by ကိုထိုက် at 00:156comments
Posted by ကိုထိုက် at 00:29 11 comments
ဧရာဝတီတိုင်းလေဘေးထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ စစ်တပ်ထဲရောက်
လေဘေးသင့်သူများအတွက် နိုင်ငံတကာမှထောက်ပံ့သည့် Shelter Box နှင့် အခြားစားစရာ အသုံးအဆောင်များ တပ်တွင်းရောက်ရှိလာပြီး အရာရှိမိသားစုများနှင့် အခြားအိမ်ထောင်သည် မိသားစုများ ခွဲဝေယူကြကြောင်း ပုသိမ်အခြေစိုက် ခလရ (၃၈) မှ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီး တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျမတို့ တပ်ထဲကို Shelter Box နဲ့ ရွက်ဖျင်တဲတွေ၊ နိုင်ငံခြားက လေဘေးအတွက်လှူတဲ့ အစားအသောက်တွေ ရောက်လာတယ်၊ ဘယ်လိုရောက်လာသလဲတော့ မသိဘူး။ Shelter Box နဲ့ ရွက်ဖျင်တဲ အကောင်းစားတွေကိုတော့ အရာရှိတွေ ခွဲဝေယူကြတယ်၊ ပိုပေမယ့် အခြားအရာခံဗိုလ်၊ အကြပ်တွေကိုတောင် ခွဲမပေးဘဲ ထောက်ပံ့ရေးဂိုဒေါင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်တယ်။ သူတို့ရတဲ့ သေတ္တာတွေထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်သမားနဲ့ အိမ်ဆောက်သုံး ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေပါတယ်။ အခြားအဆင့်တွေကိုကျတော့ ခြင်ထောင်၊ အ၀တ်အထည်နဲ့ အစားအသောက်တွေကို ခွဲပေးတာ၊ တချို့ မဲဖောက်ပေးတာ လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဝေမတည့်တော့၊ မမျှတတော့ ကျမတို့ချင်း စကားများကြတယ်။ ဘယ်လိုရသလဲဆိုတာတော့ မသိဘူး” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါပစ္စည်းများ ခွဲဝေပေးစဉ်၌ တပ်ရင်းမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက တဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြုလုပ်သည်ကို တွေ့ရှိပါက ကြီးလေးသည့် ပြစ်ဒဏ်နှင့် အရေးယူခြင်းခံရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း၊ အစားအသောက်များကို ဝေငှပေးခြင်းလည်း အပြင်တွင် လုံးဝပြောဆိုခြင်းမပြုရန် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပိတ်ပင်ထားကြောင်း အဆိုပါ အိမ်ထောင် သည်အမျိုးသမီးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က တပ်ရင်းအရာရှိတဦးထံ ညအိပ်သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတဦးက ၎င်းတည်းခိုသည့် အရာရှိမိသားစုနေအိမ်၌ အဆိုပါ Shelter Box နှင့် ရွက်ဖျင်တဲကို မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ပြောသည်။
နာဂစ်လေမုန်တိုင်းဘေးဒဏ် ခံရသူများကို နိုင်ငံတကာက ပေးအပ်သည့် အကူအညီများအနက် အချို့မှာ စစ်အစိုးလက်ထဲ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်လိုက်ရသည့်အတွက် စစ်အစိုးရကသာ အပြည့်အ၀
ချုပ်ကိုင်ဖြန့်ဝေခြင်းရှိသကဲ့သို့ ငွေကြေးအချို့နှင့် ပစ္စည်းများကို ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် လက်ခံရယူ ဖြန့်ဖြူးပေးနေခြင်းလည်းရှိသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများရှိ ပြည်သူများကမူ အစိုးရဖြန့်ဖြူးသည့် ပစ္စည်းနှင့် အစားအသောက်များ ထဲတွင် နိုင်ငံခြားက ကူညီလှူဒါန်းသည့် အစားအသောက်နှင့် ပစ္စည်းများ လက်ခံရခြင်းမရှိကြောင်း ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရလက်ထဲ ငွေနှင့်ပစ္စည်းများ အပ်နှံလိုက်သည့်အခါတွင် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ အနေ ဖြင့် မည်သည့်နေ့ရက်၊ မည်သည့်နေရာ၌ မည်သူများကို မည်မျှဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြောင်း အချက်အလက် အတိအကျတောင်းပြီး ပစ္စည်းများ အမှန်တကယ် ရောက်မရောက် လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့အစည်း များ ဖွဲ့စည်းစုံစမ်းခိုင်းသင့်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ သတင်းစာဆရာများက သုံးသပ်ပြောဆိုကြသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 18:176comments
JUNTA EVEN STEAL THE MONK’S PROPERTIES
Chief Patriarch of Thai Buddhist Abbot Organization (Sangha Raja) visited Burma and donates 10000 pieces of good quality robes for Burmese monks, who suffered and lost everything in Cyclone Nargis disaster.
Myanmar Military Government (Ministry of Religious Affair) received the donation and bound to distribute the things to the monks in the disastrous area. So far, most of the monks, who are in desperate condition were not received the robes yet and some monks, although can manage to get some robes, which are not the things donated by Thai Patriarch. Further worse, they received the local brand contained with used or old robes.
Somewhere in between the donor and end-user, someone swindle the things. Is Authority knows what is going on? Who’s holding the responsibility for that scandal? This is only an example case among the thousand others similar and shameful scandal.
Posted by ကိုထိုက် at 14:027comments
အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦး အကြမ်းဖက်ထိန်းသိမ်းခံရ
ဒေါ်စု မွေးနေ့တွင် နှင်းဆီဝါ ၆၄ပွင့်လှူဒါန်း
ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရက အတိုက်အခံပါတီဝင် ၁၃ ဦးကို ယမန်နေ့က ထိန်းသိမ်းလိုက်ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုသည်။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် ထိုသို့ ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရုံးတွင် အဖွဲ့ဝင်အများအပြား စုဝေးကြစဉ် ၎င်းတို့ထဲမှ ၁၃ ဦးကို ထရပ်ကားဖြင့် ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေများက ပြောပြသည်။ ထိန်းသိမ်းခံရစဉ် ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ခံရသူများလည်း ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များက ၎င်းတို့၏အဆိုအရ မတရား အကျဉ်းချခံနေရသည့် ဒေါ်စုအား ချက်ချင်းလွတ်ပေးရန် ကြွေးကြော်သံများ အော်ဟစ်ပြီး အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရသူများထဲတွင် သံဃာတပါးလည်း ပါဝင်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ အစိုးရအရာရှိတဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါ သံဃာ ဖမ်းဆီးရခြင်းအကြောင်းရင်းကို မသိရှိရသေးပေ။
ဖမ်းဆီးမှုများ မပေါ်ပေါက်မီ မြင်ကွင်းများ (photos: AFP)
ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း စစ်အစိုးရက ဒေါ်စုအား အကျဉ်းချထားခြင်းကို ၆ နှစ်မြောက်အဖြစ် ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးလိုက်သည်။ နိုင်ငံတကာက ကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှ နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ကို ထိုသို့ ဆက်လက် အကျဉ်းချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရာနှင့်ချီသော စစ်အစိုးရ၏နောက်လိုက် လူရမ်းကားများက ထရပ်ကား ငါးစီးဖြင့် ချည်းကပ်လာစဉ် ဒေါ်စုကို ထောက်ခံသူများ လူစုကွဲသွားကြသည်။ အချို့က ဌာနချုပ်ရုံးအတွင်းသို့ ၀င်ပြေးကြသည်။
အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရုံး နှင့် ဒေါ်စု၏အိမ်ဝန်းကျင်တို့တွင် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားပြီး သံဆူးကြိုးအတားအဆီးများကိုလည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုတွေ့ခဲ့ရသည်။အရပ်ဝတ် လုံခြုံရေးအရာရှိ ၄၀ ခန့်နှင့် စစ်အစိုးရ၏လူများက အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရုံးအနီး နေရာယူထားသည်။ သီလရှင်တစုက ဌာနချုပ်ရုံးရှေ့တွင် ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်စဉ် လုံခြုံရေးအရာရှိများက ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး မှတ်တမ်းတင်လိုက်သည်။
နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအတွင်းသို့ ရဟန်းသံဃာများ ပင့်ဆောင်ပြီး ဒေါ်စု၏ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆွမ်းကပ်လှူကြသည်။
ဒေါ်စုက အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အကူအညီဖြင့် နာမည်ကျော် ရွှေတိဂုံဘုရားကို အ၀ါရောင်နှင်းဆီပန်းများ ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့သည်။ ဒေါ်စုအတွက် အစားအသောက်များ နေ့စဉ် ၀ယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရသည့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ကိုမြင့်စိုးက အသက် ၆၄ နှစ်ထဲသို့ ရောက်လာသည့် ဒေါ်စုကိုယ်စား နှင်းဆီ ၆၄ ပွင့် သွားရောက် ကပ်လှူခဲ့သည်ဟု အဖွဲ့ချုပ် သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုသည်။
ကိုမြင့်စိုးသည် ဒေါ်စု၏မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အုတ်ဂူတွင် အ၀ါရောင် ဂန္ဓမာပန်း ၆၄ ပွင့် သွားရောက် ပူဇော်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်သည် မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ဇနီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဂူသည် ရွှေတိဂုံစေတီအနီး တည်ရှိသည်။
ဒေါ်စု၏အိမ်နီးချင်းတဦးက “ဒေါ်စုရဲ့ခြံက ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ။ မွေးနေ့မှာ ခုချိန်ထိတော့ ဘယ်ဧည့်သည်မှ လာတာမရှိဘူး။ ဘယ်သံဃာမှ ဆွမ်းခံဖို့လာတာ မရှိဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်စုသည် ပြီးခဲ့သည့် ၁၈ နှစ်အတွင်း ၁၂ နှစ်မက အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 01:46 10 comments
Myanmar junta detains 14 calling for release of Aung San Suu Kyi
YANGON, Myanmar: Myanmar's ruling military junta detained 13 opposition party members who called for the release of pro-democracy leader Aung San Suu Kyi as she marked her 63rd birthday, witnesses said.
The 13 people were taken intoatruck after dozens of Suu Kyi's supporters gathered outside the National League for Democracy party's headquarters in Yangon on Thursday, witnesses said on condition of anonymity for fear of government reprisals.
A Buddhist monk was also arrested, according toagovernment official who asked not to be named because he was not authorized to speak to the press. The circumstances of his detention were not clear.
The Suu Kyi supporters dispersed Thursday — some running back into party headquarters — after more thanahundred pro-junta thugs approached in six trucks.
Earlier in the day, the party celebrated Suu Kyi's birthday by offering meals to Buddhist monks at the headquarters, several miles (kilometers) from her home.
He also laid 64 yellow chrysanthemums at the tomb of Khin Kyi, Suu Kyi's mother and the wife of Myanmar independence hero Gen. Aung San. The tomb is located at the foot of the Shwedagon pagoda.
Posted by ကိုထိုက် at 01:436comments
Posted by ကိုထိုက် at 00:58 12 comments
Let’s startacampaign to kick out Than Shwe and his thugs by showing our hatred and disapproval to them and reveal to the world that Myanmar Tatmadaw is the illegal ruler of our country, Burma.
SPDC army vehicles.
Kyant Phut and SPDC Government affiliated organizations’ vehicles.
SPDC propaganda sign boards around the country.
Throw dirty water or mud.
Throw old engine oil.
Throw animal blood.
Throw eggs, better if rotten.
Throw tomato, better if rotten.
Not very nice to write but if dare to do, throw waste or organic waste or even shits packages or urine packages.
Posted by ကိုထိုက် at 00:347comments
Happy Birthday To Our Mother, Daw Aung San Suu Kyi
Posted by ကိုထိုက် at 15:507comments
Posted by ကိုထိုက် at 15:266comments
Posted by ကိုထိုက် at 14:286comments
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ လေဘေးသင့်ဒေသများ၏ ဖြစ်ရပ်မှန် နောက်ဆုံးသတင်း
မြောင်းမြတွင် ရေကျောက်ရောဂါများ ပြန့်ပွားနေကြောင်းနှင့် မအူပင်၊ ၀ါးခယ်မ ဒေသများတွင် ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျှောရောဂါ ပိုမိုဆိုးရွားစွာပြန့်ပွားနေပြီး နိုင်ငံတော်မှ ထိရောက်သော ဆေးကုသမှုကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရပါသည်။
မြောင်းမြ၊ ၀ါးခယ်မ၊ မအူပင်ဒေသများသည် လေဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရသော်လည်း အစိုးရမှ အရေးပေါ် အကူအညီပေးရမည့် မြို့နယ်များ စာရင်း၌ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် ဆေးဝါးအကူအညီနှင့် ထောက်ပံ့မှုများ မရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
(၁၅ရက်၊ ၆လ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်) နံနက်ပိုင်းမှ စ၍ ငပုတော၊ လပွတ္တာ ဆေးရုံသို့၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှ သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့် ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျှောရောဂါသည်များ တဖွဲဖွဲရောက်ရှိလျှက်ရှိသဖြင့် တာဝန်ရှိ ဆေးဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ကူးဆက်ရောဂါသည်များ ယခုထက်ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ပြည့်နှက်လာမည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
ဆေးဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင်လည်း ရိက္ခာ၊ ငွေကြေး၊ ဆေးဝါး လုံလောက်မှု မရှိသဖြင့် ထိရောက်သော ၀န်ဆောင်မှု မပေးနိုင်သည့်အတွက် စိတ်ဓာတ်များ ကျဆင်းလျှက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ထို့ထက် ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အဖြစ်မှာ ရောဂါဆိုးရွားနေသော ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ရန် စက်လှေနှင့် လောင်စာဆီမရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လေဘေးဒုက္ခသည်များအနက် အချို့သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ ရရှိခံစားနေရပါသည်။ ပုံမှန်လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲများရှိနေကြောင်းနှင့် ဆေးဝါးကုသခံယူနိုင်ရေးတွင်လည်း အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရပါသည်။
စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်သူရမြင့်အောင်နှင့် တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆွေတို့အဖွဲ့သည် လေဘေးသင့်ဒေသ များသို့ လာရောက်စစ်ဆေးစဉ်အတွင်း စစ်ရေးချုပ်မှ ၎င်းင်း၏ ဗိုက်ကို ပုတ်ပြ၍ “ဒီဒုက္ခသည်တွေ ဗိုက်ကားအောင် စားသောက်ဇိမ်ခံနေတာ လုံလောက်နေပြီ သူတို့ကို နေရပ်ပြန်ပို့ရန် စီစဉ်ကြ” ဟု သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကို အမိန့်ပေးညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
လေဘေးသင့်ဒေသများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသော အစိုးရ၀န်ထမ်းများအားလုံးသည် ရိက္ခာ၊ ငွေကြေး၊ လောင်စာဆီ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသဖြင့် အထက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သည့် အခြေအနေမျိုးရှိနေကြောင်းကိုလည်း ကြားသိရပါသည်။ အဖြစ်မှန်များကို တင်ပြပါကလည်း ခရိုင်နှင့် တိုင်းအဆင့် အရာရှိများကို ]ဖြစ်အောင်လုပ်} ဟု ပြောကြားကာ လက်မခံဘဲ ပယ်ချခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းအားလုံး စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းလာကာ လုပ်ငန်းခွင်မှ စွန့်ခွာရန် စဉ်းစားနေကြကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
(၁၄ရက်၊ ၆လ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်) နံနက် ၈နာရီတွင် ပုသိမ် ဂေါက်ကွင်း၌ တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆွေ ဦးဆောင်၍ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ အရပ်ဖက် အစိုးရအရာရှိကြီးများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခု ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက် ဆင်နွှဲခဲ့သော လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မိုးထဲ လေထဲမှာ ပြိုင်ပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးနောက် တိုင်းမှူးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများသာ ခန်းမဆောင်အတွင်း၌ အရက်သေစာ သောက်စားပြီး ပျော်ပါးနေစဉ် ကျန်အရပ်သားအားလုံးမှာ ၎င်းင်းတို့နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ခုံများတွင် ထိုင်၍ ၎င်းင်းတို့ပျော်ပါးနေပုံကို ကြည့်ရှုစေခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
ပြည်သူများ လေဘေးဒုက္ခနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် အချိန်တွင် တိုင်းမှူးဖြစ်သူ၏ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဂေါက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲကို ကြားသိရသူအားလုံးမှာ အော့နှလုံးနာလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းရှိ မြို့နယ်များအတွင်း၌ ဆန်စပါး ရောင်းဝယ်မှုအား အစိုးရမှ ကန့်သတ် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ယခင်ကကဲ့သို့ ကြိုက်ရောင်း ကြိုက်ဝယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘဲ အစိုးရထံသို့သာ ]ဆန်တတင်းလျှင် ကျပ်တစ်သောင်းနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးရမည်} ဟု အမိန့်ထုတ် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(၁၅ရက်၊ ၆လ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်) ငပုတောမြို့နယ်၊ ဒီဒူးကုန်းအုပ်စု အုတ်တွင်းရွာမှာ ပြန်လည် ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြသော ကျေးရွာသားများအား ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ခဲ့သောအိမ်များကို ဖျက်၍ နောက်တနေရာသို့ ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ရန် မိုးရေထဲတွင် စောင့်ဆိုင်းစေခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ငပုတောမြို့နယ် ဘုန်းတော်ပြည့်ရွာမှ သက်ကယ်တောင်မြစ်သွားရာလမ်းရှိ ချောင်းတစ်ခုတွင် အလောင်း (၁၀)လောင်းခန့် လက်များပြတ်လျှက် တွေ့ရှိရကြောင်းလည်း ကြားသိရပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 14:236comments
နအဖလက်ပါးစေများက နာဂစ် ဒုက္ခသည် ရွာသားများကို ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်နေကြ
(၁၃ရက်၊ ၆လ၊ ၂၀၀၈ခုနှစ်) နေ့က လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ပိန္န္န္နဲကုန်း သိပံ္ပကုန်းကျေးရွာမှာ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးနဲ့ ပြည်သူ့စစ်တို့က ‘ဒုက္ခသည်ရွာသားတစ်ဦးကို ဆီးအိမ်ကွဲတဲ့အထိ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ ကမ်းစပ်မှာ လာတင်သော လှေတစ်စင်းကို သူပိုင်သည် ငါပိုင်သည်ဟု ရွာသား(၃)ဦးဖြစ်တဲ့ မောင်မောင်ဇော်၊ ဦးလေးကုလားနှင့် ထွန်းသန်းတို့ စကားများကြရာ ခလရ(၅၁)မှ တပ်ကြပ်ကြီး ၀င်းလှိုင်ရောက်ရှိလာပြီး ပြည်သူ့စစ် ဖိုးဇော်ကို ၀ါးရင်းတုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ဆုံးမရန် စေခိုင်းခဲ့ပါသည်။ ဖိုးဇော်ကလည်း မိမိရွာသားခြင်း ဖြစ်နေ၍ နာကျင်အောင် မရိုက်ဘဲရှိရာ တပ်ကြပ်ကြီးဝင်းလှိုင်က ဒေါသထွက်ကာ ဖိုးဇော်ကို မြေပေါ်တွင် ၀မ်းလျားမှောက်ခိုင်းပြီး “ဒီလိုရိုက်ရတယ်ကွ”ဟု ဆိုကာ ၀ါးရင်းတုတ်ဖြင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ်ရိုက်ပါသည်။ ပြီးမှ ဖိုးဇော်လက်ထဲ ၀ါးရင်းတုတ်ထည့်ကာ ရွာသားများကို အဲဒီလိုရိုက်ဟု စေခိုင်းရာ ဖိုးဇော်လည်း ငြင်းရန် မဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့် ရွာသား(၃)ဦးကို စတင်ရိုက်နှက်ပါတော့သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်မှာ ရွာထဲက ဓမ္မာရုံဆေးခန်းအနီးမှာ ဖြစ်ပွားခဲပြီ့း မျက်မြင်သက်သေများဖြစ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးနှင့်တကွ ကျန်ရွာသားများက မကျေနပ်ဖြစ်ခါ တာဝန်ရှိသူမျာသို့သွားရောက် တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း အမှုဖွင့် ပေးရန် ငြင်းပယ်ကြပါသည်။ နောက်တစ်နေ့နံနက်တွင် အရိုက်ခံရသော ရွာသားများအား ဆေးခန်းသို့ပြရာ မောင်မောင်ဇော်မှာ ဆီးအိမ်ကွဲ၍ ဆီးမသွားနိုင်တော့သည့်အပြင် နားထင်ကွဲကာ ဦးခေါင်းဒဏ်ရာလည်း ရရှိထားကြောင်း ဆရာဝန်မှ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ခံစားနေကြရသော စိတ်ဝေဒနာရှင် ဒုက္ခသည်များ၏ ပြဿနာများကို နအဖနှင့် အပေါင်းအပါများက နားလည်မှုရှိရှိ ဖြေရှင်းရန် မကြိုးစားဘဲ လူမဆန်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်လျှက်ရှိနေသည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်ပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 14:196comments
" Despite all drug scandals are going on in Burma (MYANMAR ), father of main culprit Aung Zaw Ye Myint, Lt-Gen Ye Myint and wife Dr.Tin Lin Myint were in Singapore. They left country from 15th June,2008 by Silk Air and purpose of visit Unknown.Probably collecting all drugs related money from all sources."
Report by " Thu Ye Kaung "
Posted by ကိုထိုက် at 03:35 8 comments
Mr and Miss from UN .. Can you surely make it happen?
We are not too sure how could UN make this happen as news below. There are many questions that UN needs to answer for them-self while making this plan go ahead with Junta to be done in the whole cyclone effective area. For Yangon and nearby would be alright, but how could they make this to delta area? We doubt it.
The major question is ... Will all the workers be allowed to go everywhere necessary?
U.N. plans massive anti-dengue operation in cyclone-hit Myanmar
4:07 a.m. June 16, 2008
YANGON, Myanmar – The United Nations plans to launchamassive anti-dengue campaign this week in cyclone-hit areas of Myanmar where mosquitoes that carry the disease have becomeamajor concern, an official said Monday.
More than 1,700 volunteers will fan out across 22 priority areas in Yangon, Myanmar's biggest city, and the harder-hit Irrawaddy delta treating stagnant water with chemicals that will kill larva in places mosquitoes are likely to breed, said Leonard Ortega, the World Health Organization's dengue expert in Yangon.
The WHO and UNICEF are handling the operation with local aid groups. Known as the “bone-breaker disease,” dengue causes rashes, blistering headaches, nausea and excruciating joint aches.
“It isamajor concern not just because this is dengue season, but because of the displacement of the population, the destruction of houses and because people are more exposed to mosquitoes,” Ortega said.
“We fear that there will be more cases this year,” Ortega said.
The WHO has identified three cases of the most severe type of dengue that can cause internal bleeding, liver enlargement and circulatory shut down.
“We're all fearing that there could be an epidemic,” said Eric Laroche, the WHO's point man in Geneva on emergencies who is working on the Myanmar crisis.
No outbreaks of any disease have been reported since the cyclone hit, but there have been about 685 cases of pneumonia or other severe respiratory diseases reported along with more than 115 cases of bloody diarrhea, he said.
A few measles cases have been found, but Laroche saidamassive immunization campaign should help to prevent outbreaks. Several million children will be vaccinated in Yangon and in the delta.
With the rainy season starting, he emphasized the need to prevent mosquitoes from breeding. So far, only 1.5 tons of mosquito-killing chemicals have arrived in Myanmar with another5tons waiting to be delivered from neighboring Bangkok, Thailand, he said. The remainder is in the process of being bought.
The WHO hopes to start the operation Tuesday in Yangon and continue later in the week in the delta if supplies of larvicide are available, Ortega said.
State-run media and volunteers from the Myanmar Red Cross and other organizations will inform the public about the campaign and advise home owners to dispose of old tires, bottles, tin cans and other objects where water can collect and become breeding grounds for mosquitoes.
Posted by ကိုထိုက် at 21:359comments
Boat Trip in London and Some Burmese People.
After Nargis hits Burma in May 2008
Saffron Revolution in Sept 2007
ရုတ်တရက် တွေးကြည့်လျှင် သူများတွေ ပျော်တာ ဘာဖြစ်သလဲဟု ထင်ရပြီး၊ သူများတကာ ပျော်ရွှင်နေတာကို အနှောက်အယှက်ပေးသည်ဟု ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါသည်။
သေချာ ပြန်တွေးကြည့်လျှင် ....... အမှတ်မရှိခြင်း၊ မိမိ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နေရလျှင်ပြီးရော မြန်မာ ပြည်သူများ ရင်ဆိုင်နေရသော ဒုက္ခများအား ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိခြင်းများကို မြင်ရသည်။ (အဆိုပါ ပျော်ရွှင်နေသူများတွင် ဒုက္ခသည်ပါဟု အင်္ဂလိပ် အစိုးရထံတွင် နေထိုင်ခွင့် တောင်းယူထားသူများလည်း ပါဝင်နေသည်မှာ အံသြဖွယ်ရာ မြင်တွေ့ရပါသည်။)
ထိုသို့ မြန်မာ လူမျိုးများ များနေသေးသ၍ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးသည် စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ် နေရဦးမှာ ဖြစ်ပြီး၊ .. အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များသည်လည်း နောက်ထပ် အာဏာရှင် လက်အောက်မှာ ဆက်လက် လည်စင်းခံ နေရဦးမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ သည်လည်း သူများနိုင်ငံတွင် အောက်ကျ နောက်ကျဖြင့် ကိုယ်လုပ်နိုင်သည်ထက်များစွာ နိမ့်ကျသော အလုပ်များလုပ်ကာ မိဘ ဆွေမျိုးများနှင့် ဝေးရာတွင် နေထိုင်၍ ဆက်လက်ပြီး အနှိမ်ခံဘဝများတွင် အသက်မွေးနေရဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြောင့် ရန်ငါ စည်းပြတ်နိုင်အောင် ဆက်လက်၍ ကြိုးပမ်းနေဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
မည်သူ့ကိုမှ မုန်း၍ မဟုတ်ပါ။ ပြောသင့် လုပ်သင့်သည် ထင်သော အရားများကို တာဝန် တရပ် အနေဖြင့် ပြောဆို လုပ်ကိုင်ခြင်း သက်သက်ဖြစ်ပါသည်။
Today is 1 month and 13 days after deadly cyclone Nargis hits Burma and ..... over tens of thousands of poor farmers and people die in that cyclone.
Today is 8 months and 20 days after saffron revolution in Burma and killed many monks and people on the street of Rangoon by junta and it's followers; and ... Many monks and people has been arrested by cruel junta and it's followers.
Some Burmese People in London can enjoy in this situation with junta's staff and they all can forget about what happen in Burma now and less then 1 year.
Posted by ကိုထိုက် at 22:00 78 comments